သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ဘ၀ခြားလို့လေလား
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 9:53 PM
မအိမ့်..ဒီပို့ စ်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာပဲ Tag လုပ်တဲ ကိုရန်အောင်ကော အစ်မကိုကော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အစ်မက အရမ်းသတ္တိကောင်းတာပဲ ။ တကယ် သရဲကို အပြင်မှာတွေ့ ဖူးတဲ့ သူရှိလို့ လားအစ်မ ကျနော်တော့မထင်ဘူး ။
ဟာဟား အစ်မတကယ် သရဲတွေ့ လို့ ပြေးတယ်ထင်နေတာ ခွေးအနှစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ် ။ အစ်မအရေးအသားကတော့ဂွတ်တယ်ဗျာ ...စာဖတ်သူကို ကိုယ်တိုင်ခံစားရသလိုဆွဲဆောင်သွားတယ် ။
မံသစက္ခုလို့ ခေါ်တဲ့သာမန်မျက်လုံးနဲ့ မမြင်နိုင်တာကတော့ အမှန်ပဲဗျာ။ ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့ နတ်မျက်လုံးနဲ့တော့ မြင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုတာပဲ။ နာနာဘာဝ ၀ိနာဘာဝတွေကို တွေ့နိုင်ဖို့လေ။ ကိုယ်တိုင် ၀ိညာဉ်ဖြစ်သွားရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ သူလဲ နတ်လို့ ပြောရင် ရမလား မသိ။
မအိမ့်ရေ...ဆုဝေလဲ သရဲလို့ပြောတာထက် ၀ိညာဉ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ်။ သရဲခြောက်တယ်ဆိုတာကလဲ သူ့တို့ဘာသာ သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေကို ကိုယ်က မြင်တွေ့လိုက်ရတာမျိုးပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...။ တခါတလေ ကိုယ့်ဆီက အမျှအတမ်းလိုချင်လို့ ပြတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲနော်...။
မလေး... ပုံပြောကောင်းတဲ့မလေးရဲ့ ပုံပြင်လေး ကို ကြိုက်တယ်။ ကိုရန်ရေးထားတာ သရဲအကြောင်းတော့ ဟုတ်ဘူးနော်။ မလေးရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာလေးတွေပဲလားဟင် (ဓာတ်ပုံတွေကိုပြောတာပါ)။ မလေးက ဘလော့တွေအများကြီး ရေးတယ်နော်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ မလေး ဘလော့လုပ်ရတာနဲ့ ပျင်းချိန်တောင် ရှိရဲ့လား။ သိုးလေး မေးချင်တာရှိတယ်။ မေးမယ်နော်။ ခုမဟုတ်ဘူး။ နောက်မှ။
နောင်တော် ၊ ပိုင်မင်းဆွေ said...
ကျွန်တော် သိပ်သဘောကျ သွားတယ်။ သရဲကို သဘောကျတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆွဲ သွားပုံလေးကိုပါ။
မလေး တကယ်သွား မသွား မမြင်ရပေမယ့် အဲဒီနေရာကို
မလေးကတော့ တကယ်ကိုပိုင်တယ်ဗျာ. တက်ဂ်လုပ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်. အရေးအသားရော၊ အတွေ့အကြုံကို ကိုယ်တိုင်ရယူပုံကိုရော လေးစားချီးကျူးမိပါတယ်.
ခရီးထွက်နေခဲ့လို့ ဒီဖက်ကို မရောက်ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျ. ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်. ပိုပြီးတော့လည်း ခင်သွားတယ်. ဟတ်ဟတ်ဟတ်